U-Erich Von Däniken kunye neencwadi zakhe eziyimfihlakalo zangaphandle | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, Iincwadi
Sibhiyozela iminyaka engama-50 ye Uloyiso lwenyanga. Kodwa ngubani oxelela ukuba thina, abemi abangabantu beplanethi yoMhlaba, khange sikwazi ukoyisa (okanye ubuncinci ukusityelela) abanye izinto zangaphandle ngaphaya kwendalo yonke eyaziwayo? Yiloo nto umbhali kunye nomphandi waseSwitzerland UErich Von Däniken kwiincwadi zakhe nakwimibango yakhe iyinyani, inika ubungqina ikakhulu bezinto zakudala ezimbiweyo. Zezi I-4 yakhe izihloko apho ndijonga khona namhlanje.
1 UErich Von Däniken
1.1 Imbali ilele
1.2 Igolide yoothixo
1.3 Ukubuya koothixo
1.4 Iinkumbulo zekamva
UErich Von Däniken
Uyaziwa ngeencwadi zakhe ufology, apho ityhila khona ithiyori malunga notyelelo lwezidalwa ezingaphandle komhlaba kwiplanethi yethu ngaphambili. Ukusuka kuluntu lwezenzululwazi ezi ngcamango zichazwe njenge inzululwazikodwa Wenza uDäniken ine ingxaki enkulu phakathi kwabalandeli bakhe kwaye uyaqhubeka nokubonisa izinto ezifunyanwa ngabembi bezinto zakudala njengobungqina Obo bukho basemhlabeni.
Uye ngaphezulu kweencwadi ezingamashumi amabini anesihlanu ezipapashiweyo kwabo bathengisileyo iikopi ezingamashumi amathandathu anesithathu kumhlaba jikelele. Kwaye yaguqulelwa ngaphezulu kwe Iilwimi ezingama-30. Ezinye zezihloko zayo.
Le ncwadi iyasikhulisa imibuzo ethile ngaye Umbhalo-ngqangi kaVoynich, ekubhaleni kwakhe nanamhlanje kuhlala kungachazwanga, okanye kwi-apocrypha Incwadi kaEnoki yeTestamente eNdala apho ithetha ngezidalwa zasezulwini ezehla eMhlabeni ukuba zibe neentlobano zesini neentombi zabantu. Kwimibuzo emitsha ephoswe ngophando lwamva nje kwimigca ye Nazca.
Omnye umsebenzi onempikiswano apho uVon Däniken eqhubeka nokubonelela ubungqina bololo tyelelo lwasemhlabeni, ngokoluvo lwakhe, oluye lwalityalwa kwaye lwafihlwa yimbali esemthethweni.
Omnye umbono omnandi malunga nokuba kunokwenzeka abaphambukeli bahlala kwiplanethi yethu. Inxalenye yoluvo lokuba, kwimvelaphi yabo engaziwayo, bafikelele kwiplanethi engaphantsi emva ulahlekelwe ngumlo omkhulu kwihlabathi labo. Kwaye kwafuneka ukuziqhelanisa nezo meko yobomi. Iilebhu ezinkulu zangaphantsi komhlaba zazikhuselwe kwaye zagrunjwa, kwaye ukongeza zibeka izibonelelo ezingezizo kunye nezikhululo kwenye iplanethi, eyajika yaba yeyethu. Ekugqibeleni, bagqibela ngokuhlala kuwo emva kokuba iintshaba zabo zitshabalalisile umhlaba kwaye beza kwezethu, apho bakha khona imisebenzi emikhulu apho kushiyeke kuphela iintsalela namhlanje.
Enye yeencwadi zakhe ithathwa njengonomdla ngakumbi malunga nobukho babaphambukeli kumaxesha amandulo. Isekwe ngeli xesha izicatshulwa ezibhaliweyo emva koko, yabanjwa njengengcwele, apho iinkolelo, isimilo, isimilo kunye nezithethe zenkcubeko zixutywe kunye neminqweno yababhali bazo. Wahamba ke izidalwa zikaThixo okanye zezulu abo bakhuthazayo, ukuba ababhalanga okanye bayalele ngokuthe ngqo, ezo tekisi. Kodwa ngoobani aba babhali okanye ngabaphi abanye ababhali abazama ukufihla?
Kwesi sihloko eyona ngcamango iphambili yile kutyholwa iindwendwe ezivela ngaphandle inkolo eyahlukeneyo. Oku, ukongeza ekubamkeleni njengoothixo, emva koko ngekwakudlulise ulwazi oluthile lobuchwephesha.
UVon Däniken ukuqukumbela oku ngokufunda uthotho 'lobungqina' okanye iziphumo zifunyenwe phakathi kwamathambo aba bantu bamandulo. Ikwatolika okunye ukubonakaliswa kobugcisa bamandulo kwihlabathi liphela, njenge iinkcazo zemifanekiso "yoosomajukujuku", izithuthi zasemoyeni nezasemajukujukwini, kunye netekhnoloji entsonkothileyo. Ukwachaza ezinye izinto akholelwa ukuba ziyafana kwezinye iinkcubeko zamandulo ezingadibaniyo.
Ikwacinga ukuba ukuvela kweenkolo ezithile kungenxa yokudibana nohlanga olungaphandle komhlaba. Oku kubandakanya ukutolikwa kweBhayibhile, ngakumbi iTestamente eNdala. Uyazibuza nokuba ingaba izithethe zomlomo zeenkolo ezininzi ziqulathe "iindwendwe ezivela ezinkwenkwezini" kunye nezithuthi ezibavumelayo ukuba bahambe emoyeni njengasesibhakabhakeni. Kwaye inika umzekelo weshumi elinanye wolwakhiwo olumangalisayo lwe IPyramidi enkulu yeeCops, eGiza. Kungumqondiso wokungakwazi kwabantu, nanamhlanje, ukuwenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » UErich Von DÃ¤niken kunye neencwadi zakhe zeemfihlakalo ezingaphandle komhlaba
Inyanga. Ukufundwa okungama-7 malunga neminyaka engama-50 emva kokuba oyisile.